१२१५.३४ विन्दुमा परिसूचक (२ बजेको अपडेट)
भदौ ५, काठमाडौं (अस) । बिहीवार नेप्से कारोबार भएको तेस्रो घण्टामा १ दशमलव २९ अंक बढेर १ हजार २१५ दशमलव ३४ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २१४ दशमलव ३७ विन्दुबाट शुरु भएको नेप्से तेस्रो घण्टामा शून्य दशमलव ११ प्रतिशत बढेको हो । बिहीवार तेस्रो घण्टासम्म कारोबारमा आएका १५९ कम्पनीको रू. १४ करोड ६८ ल...
वर्ल्ड मर्चेण्टले कमायो ४८ लाख नाफा
भदौ ५, काठमाडौं (अस) । वर्ल्ड मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडले गत आवमा रू. ४८ लाख ९३ हजार नाफा कमाएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा रू. ६ करोड ४ लाख नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको नाफा ९१ दशमलव ९० प्रतिशत घट्न पुगेको छ । कम्पनीको खुद ब्याज आदानी ८५ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ९१...
दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरले ८ करोडको विद्युत विक्री गर्‍यो
भदौ ५, काठमाडौं (अस) । दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत आवमा रू. ८ करोड ६४ लाखको विद्युत विक्री गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा रू. ४ करोड ७२ लाखको विद्युत विक्री गरेको थियो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २६ करोड ४० लाख रहेको छ । जगेडा कोषको रकम रू. १३ करोड १५ लाख नोक्सानमा रहेको छ । कम्पनीको नाफा...
नेप्सेमा ६.२९ अंकको वृद्धि, ८ करोडको शेयर कारोबार (१ बजेको अपडेट)
भदौ ५, काठमाडौं (अस) । बिहीवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा ६ दशमलव २९ अंक बढेर १ हजार २२० दशमलव ३४ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २१४ दशमलव ३७ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको दास्रो घण्टामा शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत बढेको हो । बिहीवार दोस्रो घण्टासम्म कारोबारमा आएका १४२ कम्पनीको रू. ८...
पहिलो घण्टामा १.६० अंकले बढ्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट)
भदौ ५, काठमाडौं (अस) । बिहीवार नेप्से कारोबार भएको पहिलो घण्टामा १ दशमलव ६० अंक बढेर १ हजार २१५ दशमलव ६५ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २१४ दशमलव ३७ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको पहिलो घण्टामा शून्य दशमलव १३ प्रतिशत बढेको हो । बिहीवार पहिलो घण्टासम्म कारोबारमा आएका ९१ कम्पनीको रू. १ करो...
पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले तोक्यो सबैको लघुवित्तको मूल्य रेञ्ज
भदा ५, काठमाडौं (अस) । नेप्सेले सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्थाको मूल्य रेञ्ज तोकेको छ । कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि रू. १०० दशमलव ८८ देखि ३०२ दशमलव ६४ मूल्य रेञ्ज तोकेको हो । नेप्सेले कम्पनीको शेयर कारोबारका लागि एसएबिएसएल (SABSL) स्टक सिम्बोल प्रदान गरेको छ । लघुवित्तको बुधवार क...
सिद्धार्थ बैंकको ऋणपत्रको विक्री खुला
भदौ ५, काठमाडौं (अस) । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले भदौ ५ गते (आज)देखि सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्कासनमार्फत ऋणपत्र विक्री गर्ने भएको छ । बैंकले १० दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा २०८३ सालसम्मका लागि २५ लाख कित्ता ऋणपत्र जारी गर्न लागेको छ । बैंकले १५ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि र १० लाख कित्ता व्...
जनता क्यापिटलको पहिलो साधारण सभा
भदौ ५, काठमाडौं । जनता क्यापिटल लिमिटेडको पहिलो साधारण सभा भदौ २६ गते हुने भएको छ । सभा जनता बैंकको सभाहल, थापाथलिमा हुने भएको हो । कम्पनीको भदौ ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाको प्रस्तावमा आव २०७५ /०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने, लेखापरीक्षकक...